How to create more wealth in life
bishal baniya 1 year ago 4
पैसा एउटा येस्तो वस्तु हो ,जसको आवस्यकता हरेक ब्यक्ति लै हुन्छ । जस्तै बिना पानी को मान्छे आफ्नो जीवन ब्यतित गर्न सकिदैन ,ठिक त्यस्तै बिना पैसा को जीवन ब्यतित गर्न सकिदैन ।
किनकि पैसा को आवस्यकता हरेक पैला मा हुन्छ ।
खाना खाना को लागि पैसा चाहिन्छ , यात्रा गर्न को लागि पैसा चाहिन्छ , लुगा को लागि पैसा चाहिन्छ र येस्तै लखौ करनहरु छन जसको लागि पैसा अनिवार्य चाहिन्छ ।
जस्तै एउटा Dettol साबुन ले ९९.९९% किटाणुलाइ मार दिन्छ , ठिक त्यस्तै पैसा ले हाम्रो ९९.९९% समस्यहरुलाइ मरिदिन्छ ।त्यसैले पैसा बनाउन एकदमै जरुरी छ।
येहि पैसा बनाउन को लागि प्रतेयक ब्यक्तिले दिन रात मिेहनत गर्छन् कि धेरै पैसा कामाउन सकून् तर तिनीहरुले आफ्नो जीवन मा त्यति पैसा कामाउन सक्दैनन् किनभने तिनीहरुलाइ धेरै पैसा कामाउने बाटो नै थाहा हुदैन । त्यही भएर संसारका आधिकतर मान्छेहरु गरिब छन ।अब यो लेख मा मैले तपाईंलाइ पाँच येस्तो उपाय बताउने छ । जसको मदत बाट तपाईले धेरै पैसा कामाउन सकनु हुन्छ ।
हामीले आफ्नो खर्च भनदा बढी पैसा कमाउनु पर्छ । तब मात्र हामीले आफ्नो जिवनमा धेरै पैसा बनाउन सक्छौं । के तपाईंलाइ थाहा छ । कि Warren Buffet, Bill Gets साठी बर्ष भन्दा बढी उमेर का भइसकेका छन तर पनि पैसा कामाउन बन्द गरेका छैनन् । त्यही भएर हामीले पनि आफ्नो जीवन मा पैसा कामाउन बन्द गर्नु हुदैन । तसर्थ यो तरिक बाट पनि धेरै पैसा बनाउन सकिन्छ ।
2. Develop One Main Source Of Income
सब भन्दा पहिला हामीले पैसा कामाउने एउटा ठोस स्रोत बनाउन पर्छ । जसले गर्दा हाम्रो मंसिक खर्च पुर होस् । तपाईंले यो कमाई नौकरी वा ब्यापार गरि निकल्न सक्नु हुन्छ । किनकी आज हामी २१औ शताब्दी मा पुगिसकेका छौँ , र यो शताब्दी मा बीस – पच्चीस हजार को तलब ले केही पनि हुनेवाला छैन । त्यही भएर एउटा ठोस कमाई को स्रोत बनाउनु आवस्यक छ ।
हामीले अफ्नो पैसालाइ बचत गर्नु पर्छ । यह पैसा बचत को मतलब कुनै सफल ब्यापार मा लगानी गर्नु हो । जहाँ बाट भबिस्यमा धेरै पैसा फिर्ता आओस् ।
4. Buy Assets avoid Liabilities
हामीले जहिले पनि Assests किन्नु पर्छ नाकी Liabilities । Assests भन्नाले त्यस्तो वस्तु जसले हामीलाइ पैसा बनायेरा दिन्छन् । जस्तैः Shares, Bonds, Stocks वा कुनै मशिन । र Liabilities भन्नाले त्यस्तो वस्तु हुन् जो हाम्रो पैसा खर्च गरौछन । त्यही भएर दुबै चिजहरु माथी ध्यान दिन जरुरी छ ।
5. Create Multiple Source Of income
हामीले एउटा कमाई को स्रोत माथी निर्भर रह्नु हुदैन् । तपाईंलाई थाहै होला कि जो संग एउटा मात्र पैसा कामाउने स्रोत थियो । त्यसको घर को हालत यो कोरोना को समयमा कस्तो भएको होला । त्यही भएर
हामीले धेरै पैसा कामाउन स्रोत बनाउनु पर्छ ।
तसर्थ : येदि तपाईंले आफ्नो जीवन मा यी पाँच कुराहरु आफ्नो जीवन मा ल्याउनु भयो भने तपाई अवस्य नै धेरै पैसा बनाउन सक्नु हुन्छ । धन्यवाद ।
– तपाईं को लागि सुनौलो औसर
के तपाईं पनि एउटा additional income Source बनाउन चाहनु हुन्छ भने मलाई सम्पर्क गर्नु होला । तपाईंले यो काम आफ्नो घर बाट गर्न सक्नु हुन्छ ।
– Aditya patel
contact no :- +9804448987
4 thoughts on “How to create more wealth in life”
Pingback: Happy Independence Day 2020: Top 30 Wishes, Quotes, Messages
Pingback: सरकारी शिक्षकको तलब कटौती गरेर निजीका शिक्षकलाई देउ – सुग्रीम वि.क
Pingback: हवाईजहाज को रंग किन सेतो हुन्छ ? ५ ठुलो कारणहरु...lovelumbini
ShareTweetSharePin0 SharesEconomic development meansaprocess of transformation of low-income countries into high-income by better utilization of resources. Nepal is beautiful landlocked country in Asia with the area of 1,47,181 km2 of population of 29,136,808.But it is not matter of beauty today I’m discussing about fucking way of government to […]
bishal baniya 11 months ago 3
bishal baniya 1 year ago 7